Apple - Izaho dia Mac | Avy amin'ny Mac aho (Pejy 24)
Campus Apple vaovao ao amin'ny tranobe Battersea any London
Apple dia mikasa ny hametraka ny campus vaovao any Eropa ao amin'ny toby famokarana herinaratra Battersea taloha, miaraka amin'ireo marika sy faritra fialamboly hafa
MacBook Pro dia mijaly noho ny fahamaizan'ny Samsung Galaxy Note 7 izay toa tsy nisy ny tsy fahombiazana
Amin'ity fotoana ity dia heveriko fa tsy ilaina ny maneho hevitra momba ny "olana kely" nananan'ny Samsung Koreana Tatsimo tamin'ny vaovao ...
Niampanga tena ho meloka ny mpiaro an'i Celebgate faharoa
Ny voampanga Celebgate faharoa dia niaiky ihany koa fa meloka noho ny mailaka fisoratana anarana nalefany hampiasa ny sarin'olona 300, malaza maro amin'izy ireo.
Ny MacBook Pros vaovao dia mety ho tonga amin'ny volana Oktobra
Ireo sombin-kaody hita tao amin'ny macOS Sierra 10.12.1 dia midika fa ny haavo MacBook Pro dia azo havaozina vetivety.
Nanokatra ivon-toerana fampandrosoana vaovao ao amin'ny "Valley Silicon Chinese" i Apple
Ny fanitarana ny marika ankehitriny dia mitarika any amin'ny foibe Apple vaovao any Shina. Ity ivontoerana fampandrosoana vaovao ity dia ho lakilen'ny tetikadin'ny orinasa.
Drone Mavic Pro an'ny DJI hanomboka mivarotra amin'ny Apple Stores
Omaly dia andro tsara ho an'ny DJI, orinasa natokana ho an'ny fanamboarana sy fivarotana drôna ary fakan-tsary miorina ...
IMac sy Mac mini (tamin'ny 2014) ihany no navotsotra tamin'ny volana oktobra
Taorinan'ny tsaho momba ny fanombohana ny MacBook Pro vaovao nataon'i Apple amin'ny teny ifotony izay ...
Fampisehoana valin'ny Q4 2016 an'ny Apple. Hiaraka amin'ny fitaovana vaovao ve izy ireo?
Araka ny pejy fifandraisan'ny mpampiasa vola Apple, ny 4 oktobra 2016 ny fampisehoana ny valin'ny orinasa ho an'ny 27Q XNUMX
Tsaho momba ny Keynote ho avy amin'ny 24 Oktobra, Mac vaovao ao ho ato
Tsy hadinonay ny Keynote tamin'ny 7 septambra ary efa manomboka ny tsaho momba ny vaovao ...
Isa IPhone 7 (tsy ofisialy)
Raha tsy fantatra ny isa ofisialy, manampy antsika hanana hevitra ny lafin-javatra samihafa. Ny iPhone 7 dia manodidina ny tarehin'ny iPhone 6. Tsara kokoa noho ny nandrasana.
Apple Pencil, izany no tokony hataon'ny Apple
Ary farany dia nanapa-kevitra ny hividy ny Apple Pencil aho ary hanavao ary ny Air 2 ho an'ny iPad Pro. Androany holazaiko anao ny antony mahatonga izany no fanapahan-kevitra tsara indrindra azoko raisina
Nvidia sy sary ho an'ny Mac "revolisionera"
Ao anatin'ny faran'ny volana isika amin'ny resaka tsaho sy fivoahana momba ireo Mac vaovao izay afaka ...
Mpampiasa maro no misafidy ny iPhone 6 na 6 ankehitriny, maninona?
Betsaka no tsy mijery mihoatra ny famolavolana sy ny sary. Izany no antony ahombiazan'ny iPhone. Ny mpampiasa sasany izao dia mividy ny iPhone 6, fa tsy ny 6s na 7.
Amin'ny 27 Oktobra dia hanambara ny valiny ara-bola farany farany i Apple
Amin'ny 27 Oktobra, Apple dia hanambara ny valim-bola ho an'ny telovolana farany tamin'ny orinasa.
Ny Samsung Note 7 nosoloina koa manome olana
Samsung dia mamerina amin'ny olana, na dia mampihena ny hamafin'ny raharaha aza izy io. Tsy nipoaka intsony ny Galaxy Note 7, fa miakatra ny hafanana ary tsy mandeha tsara ny bateria.
Drake dia namoaka ny "Azafady Mamelà ahy," Fohy fohy amin'ny mozika Apple
Ny mpanakanto Drake dia namoaka sarimihetsika fohy fotsiny tao amin'ny Apple Music satria nitombo ny tsikera manohitra ity paikadin'ny orinasa ity
Plex dia mandefa ny "Plex Cloud" izay mamela fidirana lavitra na aiza na aiza
Plex dia nanolotra serivisy Plex Cloud vaovao izay manome fidirana amin'ny atiny na aiza na aiza mampiasa ny rahona Amazon
Vonona ny Keynote Apple mety ho amin'ny Oktobra 2016
Apple dia mandray ny lohateny ho an'ny volana Oktobra. Io no fomba mety indrindra hanambarana ny Macbook Pros vaovao fa tsy hanavao azy ireo nefa tsy hiteny na inona na inona.
Apple Maps dia manasongadina Safari ho mac
Apple Maps ho an'ny mac dia miharo amin'ny Safari mamela anao hifandray amin'ny fikarohana toerana sy teboka mahaliana manome fanohanana avy amin'ny Maps.
Jimmy Iovine: "ny kinova voalohany amin'ny Apple Music dia naniry fatratra"
Tamin'ny resadresaka nifanaovana tamin'ny BuzzFeed News dia niresaka momba ny fanavaozana ny Apple Music, ny exclusives ary ny ho avy ny Apple executive Jimmy Iovine
Ny rakikira Drake Views dia navotsotra in-1.000 lavitrisa tamin'ny Apple Music fotsiny
Ny rakikira Drake's Views dia nahatratra 1.000 tapitrisa hevitra tao amin'ny Apple Music, izay rakikira voalohany nanao izany.
Maninona aho no nanapa-kevitra ny tsy hividy ny iPhone 7
Tena nanapa-kevitra aho fa tsy hividy ny iPhone 7 vaovao an'ny Apple, saingy tsy fanapahan-kevitra maivana izany, ary holazaiko anao ny antony.
Ahoana ny fampiasana ny Center Control vaovao ao amin'ny iOS 10 (II)
Ny Center Control vaovao ao amin'ny iOS 10 dia nohavaozina tanteraka ary tena ilaina sy miasa ankehitriny. Mianara mahazo tombony betsaka amin'izany
Tuplejump no orinasan-tsolika artifisialy vaovao novidin'i Apple
Tuplejump no orinasa farany azon'i Apple izay mifandraika amin'ny drafitra ho avy Apple momba ny faharanitan-tsaina artifisialy.
Apple sy ny paikadiny momba ny vidiny ambany sy ambany
Apple dia manana paikady tena tsara hahatratrarana ny varotra bebe kokoa sy hanomezana fahafaham-po ny mpanjifa sady handresy lahatra azy ireo handeha ho amin'ilay maodely lafo vidy kokoa. Dia mandeha izany.
Apple hamoaka fanovana am-peo fohy amin'ny iTunes
Apple dia miasa amin'ny fomba vaovao hanaterana vaovao amin'ny endrika audio amin'ny alàlan'ny iTunes.
Siri dia afaka naka endrika ara-batana: mpanampy virtoaly an'i Apple ho an'ny trano
Ny tsaho dia manondro fa ny virtoaly mpanampy iray izay mitovy amin'ny Amazon Echo dia afaka nankany amin'ny dingana prototype. Siri dia hikarakara ny fitantanana azy.
Ny fanindriana ny iPhone 7 Plus dia tsy mahavita mampiato ny fihenan'ny varotra
Na dia avo kokoa noho ny nandrasana aza ny varotra ny iPhone 7 Plus, ny fangatahana manerantany dia mbola malemy kokoa noho ny an'ny iPhone 6S
Ahoana ny fampiasana ny Center Control vaovao ao amin'ny iOS 10 (I)
Raha mieritreritra ianao fa nahita izany rehetra izany tamin'ny fiandrasana iPhone 7. Ny namanao Kai Lenny dia mametraka ny maodely iPhone farany indrindra amin'ny fitsapana surf mahery vaika. Jereo izay mandresy.
Apple dia mankalaza ny fisokafan'ny Apple Store voalohany any Mexico
Sivy volana taorian'ny namoahana ampahibemaso ny tsaho voalohany momba ny fisokafan'ny Apple Store any Mexico dia efa manana ny Apple Store ireo namantsika Meksikana
Ahoana ny fampiasana tononkira amin'ny Apple Music miaraka amin'ny iOS 10
Ilay Apple Music vaovao ao amin'ny iOS 10 dia manolotra ny tononkiran'ireo hira tianao indrindra. Jereo ireo fomba roa ahafahanao miditra amin'ity serivisy ity
Ahoana ny fampiasana Digital Touch amin'ny Messages miaraka amin'ny iOS 10 (II)
Ny fiasan'ny Digital Touch izay misy ao amin'ny Apple Watch dia nafindra tany amin'ny Messages miaraka amin'ny iOS 10. Lazainay anao ny zavatra rehetra azonao atao amin'izany
Ahoana ny fampiasana Digital Touch amin'ny Messages miaraka amin'ny iOS 10 (I)
Apple Music Festival, fanambarana Apple Series Series 2, fifanarahana macOS Sierra, sy maro hafa. Ny tsara indrindra amin'ny herinandro ao amin'ny SoydeMac
Andro alahady iray hafa, mitondra anao amin'ny fanangonana ny vaovao malaza indrindra eran'izao tontolo izao ny tonian-dahatsoratry ny Soy de Mac ...
Mpampiasa tsy dia mahay loatra no mandavaka ny iPhone 7, maninona?
Ny YouTuber dia milalao prank amin'ny iPhone 7 amin'ny alàlan'ny fandavahana lavaka lohan-doha miaraka amina borola. Miezaka maka tahaka azy ny mpampiasa mieritreritra fa marina izany.
Ahoana ny fampiasana hetsika 3D Touch natiora ao amin'ny iOS 10 (II)
Izahay dia mijery ireo fiasa vaovao rehetra atolotra miaraka amin'ny fampiasa 3D Touch ao amin'ny iOS 10 ho an'ny fampiharana Apple tera-tany
Misy ireo mieritreritra fa ho tonga tsy ho ela any Espana i Apple Pay, sa tsia?
Rahoviana no tonga any Espana ny Apple Pay? Misalasala ny mpampiasa sasany ary ny hafa kosa manantena fanantenana ihany. Saingy misy fambara roa izay milaza ny fahatongavany farany.
Toy izao ny fivarotana iPhone 7, ary tsy vaovao tsara izany
Vao iray herinandro no amidy ary ny tatitra GfK dia efa nivoaka naneho hevitra momba ny varotra ny iPhone 7. Tsy ratsy, fa any Eropa dia mihena ny varotra.
Apple dia manohy miasa amin'ny "Amazon Echo" azy manokana miaraka amin'i Siri
Apple dia efa manandrana prototypes isan-karazany an'ny mpandahateny mahay miaraka amin'i Siri mitovy amin'ny Amazon Echo sy Google Home
Apple dia te-hanokatra Apple Store voalohany any Korea Atsimo akaikin'ny foiben'i Samsung
Araka ny filazan'ny Wall Street Journal, ny orinasan-tserasera Cupertino dia mety tao an-tsainy ny hanokatra ny Apple Store voalohany any Korea Atsimo, akaikin'ny biraon'i Samsung
Ahoana ny fampiasana hetsika 3D Touch natiora ao amin'ny iOS 10 (I)
iBooks Mpanoratra dia nohavaozina amin'ny andiany 2.5 miaraka amina modely sy loharano vaovao
Ny Ibooks mpanoratra dia nohavaozina ho amin'ny andiany 2.5: modely vaovao, avoaka amin'ny alàlan'ny ID miaraka amina fanamafisana sy fampivoarana ny zava-bita roa
Fanamarihana ho an'ny MacOS Sierra mitondra fiasa vaovao
Ny fampiharana ny naoty ho an'ny fizarana safidy ao amin'ilay fampiharana, ny asan'ny hierarchy, ny sary an-tsary ary ny fiovan'ny haben'ny lahatsoratra
Ahoana ny fomba hanampiana "asa iray manontolo andro" amin'ny kalandrie macOS Sierra
Misy zava-baovao marobe hitantsika ao amin'ny rafitra fiasa vaovao macOS Sierra 1o.12 natombok'i Apple tamin'ny fomba ofisialy ...
Hisokatra ny sabotsy 24 septambra ho avy izao ny Apple Store any Mexico
Manitatra tanteraka ny fivarotana Apple erak'izao tontolo izao izahay ary rehefa elaela tao amin'ny ...
Ny kinova beta an'ny iOS 10.1 ho an'ny mpamorona dia manolotra ny maody Portrait izay maka tahaka ny iray amin'ireo fiasan'ny fakantsary DSLR avo lenta
Apple dia TSY manandrana maka McLaren, nolavin'izy ireo izany
Androany dia nisy tabataba be nanerana an'izao tontolo izao Apple Car sy ny tsaho niantoka izany nandritra ny herinandro maro ...
American Express mihitsy no nanambara fa any Apple no hipetraka any Espaina
Rehefa nino isika rehetra fa ny fotoana Apple Pay dia efa nolavina tamin'ity taona ity tany Espana, tampoka ...
Androany ao amin'ny Apple Music OneRepublika manomboka amin'ny 22 ora ora Espaniola
OneRepublic dia manao fampisehoana anio ao amin'ny Apple Music Festival amin'ny 22:00 alina ora Espaniola. Ireo mpampiasa Apple Music dia afaka mankafy izany amin'ny fitaovany
Ahoana ny fomba hamohana macOS Sierra amin'ny Apple Watch
Lazainay aminao ny fomba fiasa sy ny fomba hampiasana ny Auto Unlock hanaitra ny Mac anao nefa tsy miditra teny miafina avy amin'ny Apple Watch anao
Siri amin'ny MacOS Sierra Basic Guide: mampihetsika, miantso ary manova ny toe-javatra
Siri dia efa tonga tao amin'ny Macbooks sy iMac miaraka amin'ny fanavaozana vaovao: macOS Sierra. Ankafizo ny tombony azony ary ianaro ny fampiasana azy amin'ity toro-lalana ity.
Tadiavo ny Mac-nao dia ho hitanao izay fampiasa amin'ny MacOS Sierra azonao ampiasaina
Tadiavo ny mac-nao ary zahao izay mampiavaka ny solo-sainanao amin'ireo vaovao farany ao amin'ny Mac OS X Capitan sy MacOS SIerra
Google sy ny fiaraha-miasa manohitra ny ISIS
Google miaraka amina programa vaovao dia manampy ny governemanta manandanja indrindra hametra ny fandraisana mpiasa an-tserasera amin'ny hetsika mahery fihetsika
Apple Pay dia manampy fanampiana ho an'ny banky sy andrim-panjakana vaovao miisa 30 any Etazonia
Ny isan'ny banky mifanaraka amin'ny Apple Pay dia mitombo farafaharatsiny farafaharatsiny any Etazonia, asehonay anao ireo banky mifanentana farany.
Fantatrao ve ny momba ny karatra fanomezana Apple? Azonao atao ny mahazo sy mandefa azy ireo
Apple dia mieritreritra ny zava-drehetra ary izany no antony namelany ny fandefasana karatra fanomezana amin'ny alàlan'ny mailaka ...
Apple Music: mendrika izany ve? Izany no zavatra niainako
Efa nanandrana ny 3 volana maimaim-poana amin'ny Apple Music ve ianao? Ankafizo ny mozika alaina na amin'ny Internet amin'ny fitaovanao rehetra. Andramo izao, mendrika izany.
Ny doka Apple Music farany dia mampiseho antsika James Corden, manome hevitra Eddy Cue, Jimmy Ionice ary Saint John ho an'ny doka Apple Music manaraka
Apple, voampanga ho manao firaisana ara-nofo ao amin'ny oniversite misy azy, dia mamaly ny tsikera
Toa takona amin'ny fisokafan'ny iPhone 7 tamin'ny herinandro lasa teo, lahatsoratra maro no nanakoako 'vibe ...
Ahoana ny fametrahana sy fampiasana sticker amin'ny Messages ho an'ny iOS 10 (II)
Androany isika dia hitrandraka ireo sticker vaovao izay ampidirin'ny fampiharana Messages ho an'ny iOS 10, ho hitantsika ny fomba fametrahana fonosana sticker ary ny fampiasana azy ireo
Ahoana ny fametrahana endri-tsoratra amin'ny macOS
Rehefa mampiasa fampiharana izay mamela antsika hanoratra lahatsoratra, dia tsy maintsy jerentsika aloha ...
Ny andiany faha-10 amin'ny Apple Music Festival dia manomboka anio amin'ny 21 ora sy sasany alina ora Espaniôla
Ny andiany faha-10 an'ny Apple Music Festival dia manomboka amin'ny 21 ora sy sasany alina ora Espaniola miaraka amin'ny fampisehoana nataon'i Elton John. Ho hita amin'ny fitaovana Apple izy io.
Ahoana ny fampiasana ny keyboard emoji mialoha amin'ny iOS 10
Amin'ity indray mitoraka ity dia lazainay aminao ny fomba fampiasana ireo fiasa vaovao hanoloana sy haminavina ireo endri-tsoratra emojis ao amin'ny fampiharana iOS 10 Messages
Ahoana ny fomba handefasana naoty amin'ny Messages ho an'ny iOS 10
Miaraka amin'ny fampiharana Messages vaovao ho an'ny iOS 10, afaka mandefa hafatra an-tsoratra an-tanana amin'ny namanao sy ny fianakavianao ianao. Lazainay anao ny fomba hanaovana izany
Ity ny bokotra an-trano an'ny iPhone 7 sy 7 miampy. Miaraka amin'ny 3D Touch
Vonona ny hanaisotra ny Home Button i Apple. Tsy nanao izany tamin'ny iPhone 7 sy 7 plus, fa nanome azy ny endrika vaovao izay mitarika ny fanjavonany.
Ahoana ny fampiasana ny effets Messages vaovao ao amin'ny iOS 10 (II)
Ny fanavaozana ny rindranasan'ny Messages ao amin'ny iOS 10 dia feno vokany tena isan-karazany sy mahafinaritra; anio dia hasehoko anao ny fomba fampiasana azy ireo
Ahoana ny fampiasana ny effets Messages vaovao ao amin'ny iOS 10 (I)
Ny injenieran'ny Oculus sy Magic Leap teo aloha dia manatevin-daharana an'i Apple
Ny orinasa monina ao Cupertino dia manomboka mihetsika raha ny zava-misy nohalehibeazina ary nanomboka nanakarama mpiasa
Ahoana ny fomba hanamboarana ireo fifandraisana tianao ao amin'ny iOS 10
Ianaro ny fomba hanamboarana ireo fifandraisana tianao ao amin'ny iOS 10 ary ampifanaraho ny widget vaovao amin'ny fifandraisana tianao hifandraisana haingana kokoa
iPhone 7 sy 7 miampy: Fiheverana voalohany rehefa manandrana azy
Ao amin'ny Apple Store dia efa afaka mividy na mandinika ary mamakafaka ny iPhone 7 sy 7 plus isika. Efa nanandrana aho ary izao no fahitako azy. Tsara kokoa, nefa azo ovaina ihany koa
Raha teorika dia haingana kokoa noho ny MacBook Air ny iPhone 7
Araka ny Geekbench, ny tarehimarika fampisehoana natolotry ny iPhone 7 vaovao dia avo kokoa noho ireo natolotry ny MacBook matanjaka indrindra an'i Apple.
Mandà ny fahalianany hividy Tidal i Apple
Nanome toky i Jimmy Iovine an'ny Apple Music tamin'ny resadresaka nifanaovana tamin'i Buzzfeed fa tsy te hividy Tidal i Apple. Maty i Tidal
Tsy manohana ny HomeKit intsony ny Apple TV 3
Nesorin'ny Apple ny fanohanana HomeKit tao amin'ny Apple TV 4 ka raha manavao ny iOS 10 ianao dia tsy ho afaka hampiasa ny fampiharana Home intsony amin'ny alàlan'ity fitaovana ity
Ny resadresaka farany nataon'i Tim Cook an'i Good Morning America, lehiben'ny Apple, dia manamafy fa ny zava-misy nampitombo dia mahaliana kokoa noho ny virtoaly
Fikarohana vao haingana nataon'i Slice Inteligente dia nanambara fa amin'ny fotoana farany, aleon'ny mpampiasa ny iPhone 7 Plus, ny loko mainty matte ary ny 128 GB
Mos GO: bateria ivelany hamerena ny Mac?
Raha iray amin'ireo tsy manome anao bateria 10h anao ianao hanao izay tianao amin'ny Mac, dia manolotra anao izahay Mos Go, bateria ho an'ny MacBooks!
Ny unboxing an'ny iPhone 7 dia manambara fa afaka misafidy ny bokotra Home ianao
Ny iray amin'ireo unboxing voalohany dia nanambara fa amin'ny alàlan'ny iPhone 7 vaovao dia hahafahantsika misafidy ny valiny haptic an'ny bokotra fanombohana vaovao
Mahatratra 40 tapitrisa ny isan'ny mpanjifa Spotify
Ny tarehimarika farany navoakan'ny Spotify dia mampiseho amintsika ny fomba nahatratraran'ny orinasan-tserasera Swedia nahatratra 40 tapitrisa mpanjifa
Apple dia manakarama ny mpanatanteraka Time Warner Cable teo aloha ho an'ny ekipany iCloud
Amin'ny hetahetany hitombo sy hitombo amin'ny tsena audiovisual, Apple dia nanakarama mpanatanteraka teo aloha ny Time Warner Cable malaza.
Ahoana ny fanovana ny "Memories" ao amin'ny iOS 10
Ny fampiharana iOS 10 Photos dia mitondra antsika ilay fizarana "Fahatsiarovana" vaovao. Fantaro hoe inona izany ary ahoana no ahafahanao manova azy ireo araka ny itiavanao an'ireo fitaovana fanovana
iOS 10: ampanjifaiko ny fomba famaha. Tsy misy bokotra Home.
Hate tsy maintsy apetraka amin'ny dian-tànanao ary avy eo tsindrio ny bokotra Home? Avy eo ianao dia iray amin'ny ahy raha sendra tapaka na simba, iOS 10 mamela anao hanova ny toerana.
Michael Fassbender dia nihevitra ny hanapatapaka sandry mba hisorohana ny filalaovana sarimihetsika Steve Jobs
Ilay mahery fo amin'ny sarimihetsika farany momba an'i Steve Jobs, dia nanambara tao Toronto fa saika hanapotika ny sandriny hahafahany mandao ilay tetikasa.
Ahoana ny fampiasana ny efijery hidin-trano vaovao an'ny iOS 10 (II)
Ankehitriny manana iOS 10 amin'ny iPhone isika, tonga ny fotoana hianarana ny fomba fikirakirana ny efijery hidin-trano vaovao sy ny vaovao rehetra
Ahoana ny fampiasana ny efijery hidin-trano iOS 10 vaovao (I)
Miseho eo amin'ny sehatra i Tim Cook aorian'ny Keynote
Efa iray herinandro miala ny keynote farany nanoloran'i Apple ny iPhone vaovao 7 sy 7 Plus azy isika, toy ity ...
Apple sy ireo fanavaozana nanova ny tsena manerantany
Ny tantaran'i Apple dia lava ary azo antoka fa feno fotoana mahafinaritra, henjana ary revolisionera. Ireo no fanavaozana na fanovana lehibe indrindra nataonao.
Inona avy ireo rindranasa Mac ilaina amin'ny fianarana?
App ho an'ny Mac ilaina amin'ny fianarana. Manolotra rindranasa Apple tompon-tany izahay ary iray avy amin'ireo mpamorona ivelany misy fiasa fanampiny
Spartan Pro Antivirus maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Spartan Pro Antivirus, rindrambaiko mamela antsika hanafoana ny karazana adware, malware ary virus ao amin'ny OS X dia azo alaina maimaimpoana.
Macy's dia hanokatra Apple Stores mini ao amin'ny fivarotany
Araka ny nambaran'ny orinasan'ny Macy dia nifanarahana ny hanomboka hivarotra ny fitaovan'ny orinasa ao amin'ireo ivon-toeram-pivarotana.
Austria, France, Italia ary Netherlands dia mila ampahany amin'ny onitra ampandoavin'ny EU any Apple
Raha vantany vao angatahana ny orinasa ny paoma manaikitra handoa ny ...
Dropbox dia afaka mifehy ny kaonty admin anao amin'ny OSX
Lesoka fiarovana vaovao amin'ny fampiharana Dropbox amin'ny Mac. Mitandrema satria mamela ny fidirana amin'ny haavon'ny mpampiasa amin'ny maha admin azy io.
Apple dia manamboatra takelaka madio amin'ny tetikasa Titan
Toa tsy mihetsika na aiza na aiza ny tetik'asa Titan ary noterena handroaka mpiasa maherin'ny 1.000 ny lehiben'ny mpanatanteraka ary manomboka amin'ny voalohany
iPhone 7: Ahoana no tsy mahazaka rano? Tsy be loatra
Apple dia manohy mampivoatra sy manatsara ny vokatra vokariny. Tamin'ity volana septambra ity dia nahita dingana lehibe iray isika amin'ny fanoherana ny rano amin'ny iPhone 7.
Ahoana ny fomba hikarakaranao rakitra PDF amin'ny topi-maso
Ny fitadiavana lahatsoratra amin'ny rakitra PDF miaraka amin'ny fampiharana Preview dia mora kokoa noho ny eritreretinay. Atorinay anao ny fomba fanaovana azy.
Araka ny voalazan'i Tim Cook dia mila mitandrina ny fanavaozana ny Mac isika
Nilaza tamin'ny mpampiasa iray i Tim Cook fa tokony hitandrina isika amin'ny fanavaozana Mac manaraka, izay maneho fa tsy ho ela dia ho tonga
Ireo lalao Nintendo taloha ihany dia misaotra an'i Dolphin ho an'ny Mac
Famaritana ny Dolphin, emulator lalao Nintendo ho an'ny Mac izay misongadina amin'ny heriny, ny fikirakirany ary ny fampiasana ny lalao Gamecube sy Wii
Manomboka tonga ny vaovao momba ny singa voalohany amin'ny iPhone vaovao
Na dia mbola tsy manana vaovao momba ny fahatongavan'ireo iPhone 7 aza izahay dia marina fa efa manomboka ...
Ny iPhone 7 Plus dia manomboka halefa amin'ny mpampiasa
Ireo singa voalohany amidy amin'ny iPhone 7 Plus dia efa nalefan'i Apple; Voamarin'ny mpanjifa sasany tamin'ny alàlan'ny UPS izany
Ireo iPhones vaovao, AirPods, Apple Watch Series 2 vaovao, Apple Music Gift Cards ary maro hafa. Ny tsara indrindra amin'ny herinandro ao amin'ny SoydeMac
Ny alahady voalohany dia tonga taorian'ny nanoloran'ny Apple ny vokatra vaovao tao amin'ny Keynote Alarobia lasa teo….
Hita ao amin'ny YouTube izao ny lahatsarin'ny fehezanteny amin'ny 7 septambra
Hita amin'ny YouTube izao ny horonantsary feno fehezanteny tamin'ny 7 septambra.
Apple miasa amin'ny famandrihana tsy misy tariby "tonga lafatra" ho an'ny iPhone 8
Ny patanty iray dia nanambara fa i Apple dia manohy miasa amin'ny teknolojia famandrihana tsy misy tariby izay azony ampiharina amin'ny iPhone 8
Ny taranaka fahatelo Apple TV dia nanisa ny androny
Apple dia nanapa-kevitra ny hisintona ny Apple TV andiany faha-3 raha vantany vao tafavory ny taranaka faha-4 ary manome endrika hafa
Apple dia nilaza fa efa miasa i Foxconn manamboatra any India
Apple dia manosika an'i Foxconn hanomboka handray ireo dingana voalohany any India ary hahafahany manokatra ireo orinasa voalohany.
Apple Music dia efa manana mpamandrika 17 tapitrisa
Ny angona farany momba ny isan'ny mpanjifa Apple Music dia mampiseho amintsika fa manana mpanjifa 17 tapitrisa ny orinasa Cupertino
Azo jerena ao amin'ny YouTube izao ny horonantsary momba ny fehezanteny 7 septambra
Taorian'ny volana maro nisian'ny vinavina, ny tsaho sy ny hafa, ny alarobia 7 septambra lasa teo, namela fisalasalana izahay ary ho an'ny ...
Azo atao ve ny mandro amin'ny Apple Watch? Io no azonao atao sy tsy azonao atao
Ny Apple Watch Series 2 dia mamela ny filomanosana, ny fandroana, ny filalaovana polo rano, ary afaka hiparitaka noho ny haitao vaovao
Aza mikipy na tsy hahita ity famintinana keynote faharoa faharoa ity ianao
Atorinay anao ny famintinana fohy, fohy, fohy momba ny adiny roa mahery izay naharitra ny fehezanteny lehibe an'ny fampisehoana iPhone 7 sy Apple Watch Series 2
Mampitandrina i Apple fa ny iPhone mainty manjelatra 7 dia mety iharan'ny aretin-koditra mikraoba
Ny lokon'ny Glossy Black vaovao an'ny iPhone 7 dia tena tsara tarehy nefa marefo ary manoro hevitra ny Apple fa hampiasa fonosana hiarovana azy isika.
WatchOS 3 dia aseho amin'ny endrika vaovao maro
Vao natolotra ny Apple Watch 2, miaraka amina endri-javatra vaovao marobe ao anaty fitaovana sy rindrambaiko, izay ...
Ofisialy: manana EarPods sy AirPods isika
Ao amin'ny lahateny fototra tamin'ny 7 septambra, natokan'ny Apple ny ankamaroan'ny fotoana natokana ho an'ny fampisehoana vokatra vaovao, ...
iPhone 7 naseho: ny tsaho efa voamarina ary betsaka kokoa
Efa naseho izy io, ary noho ny kaonty Twitter an'i Apple izay tonga. Ireo ny vaovaon'ny terminal tsy mampino. IPhone 7
Ny vaovao rehetra momba ny IOS 10 dia natolotra tao amin'ny keynote
Famintinana ireo zava-baovao ao amin'ny IOS 10 aseho ao amin'ny keynote an'ny Apple. Sarimiaina amin'ny hafatra, fampandrenesana vaovao, Siri amin'ny fampiharana maro hafa
IWork vaovao sy nohavaozina, miaraka amin'ny fiaraha-miasa amin'ny fotoana tena izy koa
Tao amin'ny Keynote androany 7 septambra tao San Francisco, Apple dia nanolotra, ankoatry ny zava-baovao maro hafa, vaovao sy ...
Super Mario Bros dia ho hita amin'ny iPhone
Ao amin'ny keynote ny fifanarahana miaraka amin'i Nintendo dia natolotra ka ny App Store, dia mivarotra ny lalao Nintendo toy ny Super Mario Bros
Efa manomboka amin'ny China ny iPhone 7 vaovao
Mbola tsy naseho izy io, fa toy ny mahazatra ao amin'ireo keynotes goavambe natolotr'i Apple farafaharatsiny ...
Apple Pay dia mahatratra 20 ny banky sy andrim-bola vaovao any Etazonia
Tsy fantatsika raha androany i Apple dia hiresaka momba ny fomba fandoavam-bola amin'ny finday, saingy fantatra fa amin'ny ...
Azonao atao ny mahita ny Keynote atoandro atoandro amin'ny fitaovana rehetra
Andro tsara androany ary azo antoka fa efa milamina ny mpiasa ao Cupertino ankehitriny. Rahoviana…
Mihidy izao ny Apple Store Online: Andro ifotony ...
Tahaka ny fanaon'i Apple antsika taloha, alohan'ny keynote rehetra amin'ny fampisehoana fitaovana vaovao avy amin'ny ...
Apple dia mifampiraharaha amin'ny Sony hitondra Apple Pay any Japon
Ny orinasa monina ao Cupertino dia mifampiraharaha amin'ny Sony mba hahafahany manolotra Apple Pay haingana kokoa fa tsy any Japon, amin'ny fampiasana ny rafitra fandoavam-bola FeliCa.
Ny rindrambaiko Apple Music ho an'ny Android dia navoazina mihoatra ny 10 tapitrisa mahery
Ny fampiharana Apple Music ho an'ny Android dia nahatratra 10 tapitrisa fotsiny ny fisintomana, sivy volana taorian'ny nidirany tamin'ny Android
iOS 9 dia hita amin'ny 88% amin'ireo fitaovana tohanan'ny
Andro vitsivitsy sisa hahalasa ny famoahana ofisialy ny kinova farany an'ny iOS 10, dia nanavao ny angon-drakitra momba ny fananganana ny iOS 9 ilay orinasa.
Apple Watch 2 dia hazava kokoa noho ny efijery manify
Apple Watch 2 dia manana efijery LCD manify sy maivana kokoa, batery matevina manana fizakantena bebe kokoa. GPS puce sy fisehoana manerantany mitovy amin'ilay teo aloha
iPhone 7 dia ho 35% haingana kokoa noho ny iPhone 6 araka ny heverina Geekbench
IPhone 7 dia ho 35% haingana kokoa noho ny teo alohany araka ny heverina ho geekbench. Ny chip A10 dia hanana CPU 2,4 Ghz, mitovy amin'ny iPad Pro
Vaovao Apple Music: rakotra gara, lisitra playlist manokana ...
Apple dia manohy manery ilay mpandefa haingam-pandeha hanolotra fampahalalana bebe kokoa sy serivisy tsara kokoa amin'ny alàlan'ny serivisy mozika streaming Apple Music
Apple mandefa karatra fanomezana Apple Music izay manome tolotra roa volana
Mba hampitomboana ny isan'ny mpanjifa Apple Music dia nandefa karatra fanomezana $ 99 i Apple izay ahafahantsika mitahiry serivisy 2 volana
Mandeha indray ny tsaho momba ilay scanner iris ho an'ny iPhone an'ny 2017
Ora vitsivitsy monja isika amin'ny fampisehoana ny iPhone 7 vaovao sy ny iPhone 7 Plus, fa ny tsaho momba izany ...
Apple te hanararaotra ny vongan'i Samsung
Apple dia nanangana ny andrasana amin'ny varotra ho an'ny iPhone 7 aorian'ny Samsung Pcture ary mampitombo ny baiko ho an'ny singa sy singa avy amin'ny mpamatsy
Afaka manome ny famandrihana azo havaozina ao amin'ny App Store ireo mpandraharaha ankehitriny
Ny rafitra famandrihana vaovao izay nambaran'ny Apple tamin'ny WWDC farany teo, dia efa azon'ny mpandrindra ampiasaina.
Nilaza ny talen'ny fitantanam-bola ao amin'ny faritra Euro fa Apple "tsy mahatakatra ny toe-javatra" momba ny fanalavirana hetra
Jeroen Dijsselbloem, lehiben'ny vola amin'ny faritra Euro, dia niampangana mafy an'i Apple miampanga azy ho "tsy mahatakatra ny toe-javatra" ...
Apple stock dia manomboka miha ambany
Ny tahiry Apple Watch any amin'ny firenena sasany dia nanomboka nihalany ambany, na tamin'ny vy na tamin'ny maodely aliminioma, izay hanamafisana ny mety ho fampisehoana ny taranaka faharoa
Ity dia mety ho ilay iPhone 7 amin'ny loko mainty sy manjelanjelatra
Ato anatin'ny roa andro dia ho afaka hamarinina isika nefa tsy ho ela ny tsaho milaza fa hanolotra loko vaovao roa i Apple dia tena izy na forona tsotra ihany
Tonga ny vokatra Apple vaovao, hivarotra izay anananao izao ve ianao?
Afaka roa andro dia ho tonga eo amin'ny fiaraha-monina ny andiana vokatra Apple manaraka, andiany iray izay ...
Araho mivantana ny keynote an'ny iPhone 7 avy any Mac aho
Ity no toerana mety hanarahana mivantana ny hetsika izay nomanin'i Apple ho antsika amin'ny andro manaraka ...
Apple dia manomboka tsingerin'ny fanadiovana ny App Store manomboka anio
Araka ny nambaran'ny Apple ampahibemaso nandritra ny herinandro lasa teo, tsingerin'ny ...
Ration iray hafa amin'ny famoahana: ny iPhone 7 dia tsy ho tantera-drano
Tsaho momba ny iPhone 7 fa mety tsy tantera-drano izy io. Fanatsarana hafa ao amin'ny A10 Chip misy hafainganana ambony sy Dual Core. Fanatsarana ny fakan-tsary
Bill Graham Auditorium dia manomboka mahazo haingon-tsoratra keynote 7 septambra
Efa voapetraka ny haingon-trano ho an'ny Bill Graham Auditorium any San Francisco. Apple dia maniry ny hamita ny haingon-trano alohan'ny alatsinainy ho avy izao.
Lahatsary vaovao momba ny fivoaran'ny Apple Campus 2
Volana vaovao dia asehonay aminao ny horonan-tsary vaovao iray izay ahitanay ny fivoaran'ny asan'ny Apple Campus 2.
Apple dia mampihetsika ny kaonty @Apple ho an'ny teny fototra 7 septambra
Apple dia namerina namerina ny kaontiny tao amin'ny tambajotra microblogging Twitter miaraka amin'ilay sary nampiasaina tamin'ny fanambarana ny keynote manaraka tamin'ny 7 septambra
Ity dia mety ho ilay tranga iPhone 7
Ny sary tafaporitsaka vaovao dia manambara 7-inch, 4,7GB iPhone 256 izay misy AirPods fa tsy ilay adapter jack Lightning malaza
Ny antitrust sinoa dia manadihady ny fividianana Uber China avy amin'ny mpiara-miasa Apple Didi Chuxing
Ny fividianana mpiara-miasa amin'i Apple ao amin'ny firenena, Didi Chuxing, dia nahatonga ny fahalianan'ny kaomisiona antitrust.
Manohy mitsambikina hatrany ny tsaho ary anio dia mikendry vokatra vaovao izay marika Beats, izay fantatsika ...
Fanokafana Apple Store vaovao, any Mexico sy any Cologne, Alemana
Na eo aza ny tsy fahazoana antoka ofisialy avy amin'ny orinasa dia miharihary ary mandroso tsara ...
Ny iPhone 7 dia mety misy amin'ny loko 5 hatramin'ny haino aman-jery japoney
Sarin'ireo heverina ho karatra SIM an'ny iPhone 7 vaovao misy loko 5 hafa. Amin'ity faritra ankehitriny ity dia hanampy ny loko mainty manjelanjelatra antsoina hoe "Gloss Black"
Sintomy ny sary an-tsary miaraka amin'ny sarin'ny keynote an'ny Apple
Amin'ity fotoana ity dia 5 andro sisa ho an'ny fampisehoana ofisialy ny iPhone 7 vaovao sy ny iPhone 7 Plus, ...
Jessica Alba no handray ny fandaharana Apple TV, "Planet of Apps"
Mila tolak'andro fotsiny ny fahitalavitra sy ny fantsona samihafa, indrindra ny any Espana, vao homena ...
Ahoana no ahafantaranao hoe ohatrinona ny RAM napetrakay tao amin'ny Mac
Tsy isalasalana fa maro aminareo no mazava momba ny toerana hahitana hoe ohatrinona ny RAM napetrakay tao amin'ny Mac ...
Patanty Apple vaovao ho an'ny sehatra marani-tsaina miaraka amin'ny haitao Liquidmetal Tech.
Tsikelikely dia misy patanty maro miaraka amin'ny tombo-kasen'i Apple. Tamin'ity indray mitoraka ity, niaraka tamin'ny Liquidmetal, dia namolavola firaka vaovao tena mahaliana izy ireo.
Tsy isalasalana fa ity dia iray amin'ireo fanontaniana izay ho an'ny maro dia manana valiny tsotra, mihoatra ny RAM ...
Efa manana ny daty ofisialin'ny keynote an'ny iPhone 7 sy iPhone vaovao isika ...
Ny campus Austin any Apple noroahina tamin'ny afo avy amin'ny tontolon'ny masoandro
Ireo biraon'ny Apple any Austin dia voatery najanona noho ny fahamaizana tao amin'ireo panneaux solaires izay teo ambonin'ny tampon'ireo birao.
Raha mila miverina amin'ny lasa ianao rehefa manamboatra na manova antontan-taratasy, miaraka amin'ny fiasa antontan-taratasy momba ny mac anao dia azonao atao izany
Raha izaho manokana dia efa mandroso aho fa tsy nanana ny hevitro momba ity trano izay haorina 5 km miala ny ...
Intel dia nanambara ireo mpikirakira 'Kaby Lake' ambany hery
Intel dia nanambara ny processeur Kaby Lake U-Series sy Y-Series vaovao miaraka amin'ny fahombiazany sy ny hafainganana ary ny fanjifana herinaratra ambany kokoa ho an'ny MacBooks ho avy
Inona no miafina amin'ny sarin'ny fanasana ho an'ny Keynote amin'ny 7 septambra?
Omaly dia namoaka lahatsoratra voalohany izahay ny maraina izay tsapanay fa tonga ny fanasana ...
Apple dia manome modely Apple Watch 10 sy AirPods ao amin'ny Vaomieran'ny Toekarena Eurasia
Nisy antontan-taratasy iray vao navoaka izay ahitantsika ireo maodely manaraka an'ny Apple Watch, iPhone ary headphone izay hahatratra ny tsena amin'ny volana ho avy
Tim Cook dia namoaka taratasy misokatra ho an'ny fiarahamonina Apple any Eropa
Taorinan'ny hetsika farany sy ny lamandy atrehan'ny orinasa Cupertino noho ny fanaony amin'ny ...
Apple dia azo nasaina nandoa 1000 miliara euro ho an'i Irlandy
Ny fanasaziana 1.000 tapitrisa Euros an'i Apple dia azo hamarinina rehefa nambara fa tsy ara-dalàna ny fifanarahana hetra azo tamin'i Ireland
Raha ny filazan'i Mark Gurman dia hanavao ny Mac amin'ny Apple i Apple amin'ny Oktobra
Ny tsaho farany dia milaza fa tsy hanolotra ireo Mac vaovao intsony i Apple amin'ny lahateny fototra amin'ny 7 septambra, fa hiandry ny volana oktobra vao hanao izany
Apple hanavao ny MacBook Pro sy ny Air amin'ny Oktobra
Amin'ny volana oktobra ho avy izao dia afaka nanolotra MacBook Pro sy Air vaovao nohavaozina i Apple, raha miasa amina monitor 5K miaraka amin'i LG
Tena mahaliana ny volana septambra: ataovy izay hampialana voly anao!
Roa andro mahery monja dia mandra-panombohan'ny volana vaovao. Volana safidy foana ny volana septambra ho an'ny ...
Ahoana ny fomba hijerena mailaka vaovao avy amin'ny Mail miaraka amin'ny hitsin-dàlana fitendry
Misaotra ny hitsin-dàlana fitendry izay azontsika atao ny manamarina haingana raha manana mailaka vaovao amin'ny Mail isika, raha mbola manana ny maso ihany ny maso mailaka
Mazava fa rehefa miresaka robot na robotika amin'ny ankapobeny isika dia tsy afaka manilika ny hevitra tsy ho ela ...
Efa zatra mahita doka mampitaha ny vokatra Apple toa ny Mac, iPhones na ...
Apple dia nanambara ny hevi-dehibe iPhone 7 ho an'ny 7 septambra
Ora vitsy lasa izay, ilay mpiara-miasa amintsika Pedro dia nanoratra raha ity no herinandro natombok'i Apple ...
Fitbit dia nanambara ireo fehin-tànany vaovao manisa: Charge 2 sy Flex 2
Fitbit dia nanambara tamin'ny fomba ofisialy ireo maodely vaovaony amin'ny fametahana fehin-tànana, Charge 2 ary Flex 2, feno vaovao sy kojakoja vaovao.
Philips dia mandefa sensor vaovao momba ny fihetsiketsehana an-trano
Philips dia nanambara sensor vaovao mihetsika antsoina hoe Hue Motion Sensor izay ahafahanao mifehy ny jiro ao an-tranonao rehefa mihetsika ianao
Hamely ny haino aman-jery amin'ity herinandro ity ve ny fanasana voalohan'ny volana septambra nataon'i Apple?
Tapitra ny volana aogositra ary ny haino aman-jery sy bilaogy rehetra manampahaizana manokana amin'ny vaovao mifandraika amin'ny paoma manaikitra dia ...
Fa maninona no tapaka foana ny tariby iPhone?
Nitranga tamintsika rehetra izy io, tapaka ny tariby misy ny vilan'ny charger an'ny iPhone. Eo amin'ny ambaratongan'ny iPhone ve ny fanampiana? Hamboarin'izy ireo ve ity korontana ity?
Ny rakitsary Apple Music farany, ny ranomasin'i Frank Ocean, dia nalaina an-keriny in-750.000 XNUMX
Herinandro aorian'ny famoahana ny rakikira farany an'i Frank Ocean ho an'ny Apple Music fotsiny dia efa nakarina mihoatra ny 750.000 ny rakikira vaovao.
Tsy mandainga ny Universal Music: tsy ho tonga amin'ny Apple Music irery ny rakikira farany an'i Lady Gaga
Ny rakikira mpihira Lady Gaga manaraka dia tsy ho hita manokana amin'ny serivisy fitaterana mozika, ao anatin'izany ny Apple Music
Samsung Galaxy Note 7 vaovao no may.
Samsung Galaxy Note 7 vaovao no may ary navoakan'ny fitaovana fanampiny aorian'ny fivarotana. Mampidi-doza ve ny charger «sinoa»?
Ilay Apple natolotro manokana dia tsy mahatratra dolara iray tapitrisa
Ilay Apple I manokana miaraka amina loko maitso maivana, maodely tokana manerantany, dia natao lavanty tamin'ny vola latsaky ny 1 tapitrisa dolara
Apple dia hampiditra ny rafitry ny fandoavam-bola Felica amin'ireo terminal amidy any Japon
Apple dia mifampiraharaha any Japon mba hampifangaro ny rafitra fandoavambola japoney ampiasaina amin'ny fitateram-bahoaka Felica
Alao tahaka ny OS Macintosh amin'ny Nintendo 3DS
Ny marina dia ilay Macintosh Plus izay kinova amin'ny rafitra fiasa napetraka ho emulator amin'ny Nintendo ...
Ahoana ny fomba fananganana sy fampiasana iCloud Drive amin'ny macOS Sierra
iCloud Drive dia mijanona eto. Raha te hampiasa an'io fiasa io ianao, dia tena ilaina ny mampifanaraka azy tsara. Ataovy.
Alicia Keys, Elton John, Britney Spears ankoatry ny hafa dia hiaka-tsehatra amin'ny Apple Music London Festival
Tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity dia nanambara ny datin'ny fanontana fahafolo amin'ny Apple Music Festival i Apple, teo aloha ...
Universal Music dia tsy hahatratra fifanarahana exclusivity amin'ny sehatra streaming rehetra
Tao amin'ny Universal Music dia tsy nipetraka tamim-pahamendrehana fa i Frank Ocean dia namoaka tamim-pahaleovan-tena ny rakikirany farany ary tsy hamela fifanarahana exclusivity bebe kokoa
Ahoana ny fomba hanokafana varavarankely vaovao amin'ny Mail miaraka amin'ny hitsin-dàlana tsotra amin'ny keyboard
Mety hisy mihoatra ny iray aminareo manana kaonty mailaka marobe ao amin'ny mailaka fampiharana ary ity ...
Office 2016 ho an'ny fanavaozana ny mpampiasa 64-bit an'ny Mac
Andiany voalohany an'ny Microsoft Office 2016 amin'ny sombiny 64 an'ny Mac. Fanatsarana ny fahombiazana sy ny fahamendrehana ary koa ny fiasa vaovao sasany. Lisitry ny vidiny
Samsung Milk Music dia hampidina ny jamba amin'ny volana septambra
Vao nanambara ny fanakatonana ny serivisy mozika streaming Milk Music ny orinasa Koreana Samsung
Ny kaody loharano MacOS Sierra dia manamafy ireo fisehoan-javatra vaovao amin'ny Macs ho avy
Raha ny filazan'ny mpiara-miasa amin'ny 9to5Mac dia hita tao amin'ny kaody loharano an'ny rafitra fiasa vaovao masOS Sierra (ankehitriny ...
Inona ny tsaho momba antsika anio momba ny MacBook Pro 2016 vaovao
Tena eo akaikin'ny fanolorana MacBook Pro 2016 vaovao izahay ary ny tsaho mivoaka ao ...
Wolfe dia mamadika ny MacBook ho lalao filalaovana avo lenta
Wolfe dia fitaovana vaovao mitady famatsiam-bola amin'ny Kickstarter ary manampy karatra sary amin'ny MacBook
Spotify dia te-hanomboka handoa kely ny mpanakanto
Spotify dia te hampihena ny isan-jato aloany amin'ny orinasa firaketana an-tsoratra ankehitriny, fa tian'izy ireo kosa ny mampitovy azy amin'ny Apple Music
Fanovana bebe kokoa amin'ny magazay Apple: tranoheva vaovao sy volavolan-trano
Famolavolana ny fivarotana Apple ara-batana, na ara-batana na ny famoronana toerana vaovao ary fiasa vaovao hanatsarana ny serivisy ho an'ny mpanjifa
Foxconn dia nitatitra ny fahafatesan'ny mpiasa roa tao aminy
Fotoana elabe izay tsy nahitantsika vaovao momba an'ity karazana hetsika sarotra ity miaraka amin'ny orinasa sinoa lehibe, Foxconn….
Ny iPhone 6 sy 6 Plus dia mety hanana olana amin'ny fanaraha-maso
Fitaovana IPhone 6 sy iPhone 6 Plus manomboka amin'ny 2014 no miaina olana amin'ireo mpamily finday.
My Notebook Air Vs MacBook Air, fahasamihafana lehibe?
Ny fanoloran-tenan'i Xiaomi amin'ny solosaina finday, ny Mi Notebook Air, dia efa hita amin'ny tranokala maro. Toa tsara, tsara ary mora vidy. Hivarotra izany ve?
Ny orinasan-tsoratra dia te hanana Spotify handoa mitovy amin'ny Apple Music
Spotify dia manana olana hafa. Efa tapitra ny fahazoan-dàlana telo lehibe ananany ary mitaky azy hampifanaraka ny fandoavam-bola ataon'ny Apple Music ny orinasan-tsoratra
Ny sasany aminareo dia efa nandre momba ity fanangonana solosaina Apple ity izay ananany ao amin'ny tranombakoka ...
Apple dia nametraka patanty vaovao ho an'ny teknolojia Augmented Reality (AR). Azo tsapain-tanana tsikelikely ny fandrosoana amin'ity sehatra ity.
Apple dia mividy ny orinasa Gliimpse, manokana amin'ny angona fahasalamana
Apple dia manohy mifantoka amin'ny fanatsarana ny fahatsiarovan-tena momba ny fahasalaman'ny mpampiasa. Izany no nividianany ny orinasa Gliimpse volana vitsivitsy lasa izay.
Te hamono ny fanamarinana XNUMX-Dingana ho an'ny ID Apple? Atorinay anao ny fomba fanaovana azy
Tutorial hanakanana ny fanamarinana dingana roa rehefa mampiasa Apple ID ho an'ny serivisy mitaky ny fampiasana azy
Apple dia nanambara daty hanaovana Apple Music Festival hatao any London
Vao avy nanambara ny daty vaovao amin'ny Apple Music Festival 2016 i Apple, izay hatao ny 18 ka hatramin'ny 30 septambra amin'ity taona ity.
Apple nandefa ny fandaharana fanomezana fanampiana an'i Red Cross an'i Louisiana
I Apple indray dia nandefa ny fandaharana fanomezana ho an'ny Vokovoko Mena mba hanampy amin'ny tondra-dranon'i Louisiana
Ny rakitsary Frank Ocean dia tsy misy afa-tsy amin'ny Apple Music
Ary farany, ary rehefa ela tara dia nahatratra ny Apple Music irery ny rakikira farany nataon'i Frank Ocean
Fampiroboroboana ny kabary Headphones mifarana amin'ny 5 septambra
Ireo tovolahy avy any Cupertino dia mandefa mailaka aminay milaza ny fiafaran'ny tolotr'izy ireo ao amin'ny ...
Google dia hanaisotra ny fanohanana ny fampiharana Chrome amin'ny Mac
Ity dia iray amin'ireo vaovao izay tsy mahagaga ny mahita ny làlan'i Google tato anatin'ny taona vitsivitsy ary ...
Apple Pay dia mahazo tombony amin'ny raharaha banky aostralianina
Na dia Apple Pay aza dia iray amin'ireo safidy fandoavam-bola tsara indrindra misy ankehitriny, ny sasany ...
Fanairana noho ny voalaza fa nangalatra fitaovana mpitsikilo avy amin'ny NSA
Ny voalaza fa nangalatra fitaovana mpitsikilo NSA tany Etazonia dia namoaka ny fanairana rehetra raha nitaky ny toerana ofisialin'i Apple
Sony dia manolotra ny Car Multimedia System voalohany mifanaraka amin'ny Apple Car sy Android Auto ho solon'ny rafitra ankehitriny
Apple dia namoaka ilay Beta 7 sy iOS 10 ho an'ny daholobe Beta
Avy amin'ny mahazatra, Apple dia namoaka ny beta fahafito an'ny iOS 10 ho an'ny mpamorona sy ny beta ho an'ny daholobe fahenina ao anatin'izany ny fanatsarana sy fanamboarana ny fahombiazana
WhatsApp ho an'ny Mac: Ahoana ny fomba fampidinana sy fampiasana (Tutorial)
Ny WhatsApp Web dia tsy mahazo aina foana ary misy ny fampiharana antoko fahatelo tsara kokoa. Izany no antony ananatsika manana rindranasa ofisialy ho an'ny Mac koa. Jereo hoe ahoana ny fampiasana azy eto.
Araka ny Bloomberg, ny Apple Watch vaovao dia hanana GPS fa tsy misy fifandraisana finday
Raha ny filazan'i Mark Gurman, ny taranaka manaraka an'ny Apple Watch dia hanana puce GPS fa tsy hahaleo tena tanteraka ary tsy hanana fifandraisana finday
Ny fanoloran-tenan'i Apple amin'ny tontolo iainana sy ny fandraisan'anjaran'ireo mpamatsy sinoa azy
Manidy ny fifanarahana amin'ireo mpamatsy sinoa i Apple hanamboarana 100% amin'ny herin'ny rivotra. Fifanarahana manokana amin'ny Lens amin'ny famoronana vera iPhone
Ireo magazay kendrena any Etazonia dia milaza fa ny fivarotana ny vokatra Apple dia 20% amin'ny tranombarotra.
Ny fivarotana Apple voalohany any Aotrisy dia eo akaiky eo
Tsy mbola nahita vaovao mifandraika amin'ny fisokafan'ny fivarotana Apple any ivelan'i Etazonia, Sina ...